जीवित सिफारिश गर्न यी कागजात चाहिन्छ, शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र लाग्छ ५ सय – MySansar
जीवित सिफारिश गर्न यी कागजात चाहिन्छ, शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र लाग्छ ५ सय
Posted on July 17, 2017 by Salokya
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर तपाईँले आफूलाई जिउँदो रहेको प्रमाणित गर्न पनि कहिलेकाहीँ कागज देखाउनु पर्ने हुनसक्छ। यसको लागि तपाईँले सिफारिश लिनुपर्ने ठाउँ स्थानीय तह हो। स्थानीय तहको वडामा गएर तपाईँले यस्तो सिफारिश लिनुपर्ने हुन्छ।
कति खर्च लाग्छ त यस्तो सिफारिश लिनका लागि? स्थानीय तहले आ-आफ्नो हिसाबले शुल्क तोकेका हुन्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने भर्खरैको नगरसभाले पास गरेको आर्थिक ऐन अनुसार जीवित सिफारिश गर्न ५ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने भनी तोकेको छ। यसअघि पनि जीवित सिफारिश गर्न यति नै शुल्क लाग्थ्यो। के के कागजात चाहिन्छ त जीवित सिफारिश गर्न। हेर्नुस् भित्र।
यति कागजात भयो भने तपाईँ जीवित सिफारिश हुनुहुनेछ।
2 thoughts on “जीवित सिफारिश गर्न यी कागजात चाहिन्छ, शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र लाग्छ ५ सय”
Kiran Tamrakar says:
करै कर ले भरिएको मेरो देश नेपाल
Birth- Tax pay- Death
कुनै पनि व्यक्ति जिवित रहेको प्रमाण व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएपछि हुनु पर्ने होईन र ? स्थानीय निकायमा पनि व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनु पर्ने रहेछ अनि सिफारिस जुन निकायले खोजेको हो त्यहाँ पनि व्यक्ति स्वयं उपस्थित भईसकेपछि त्यो व्यक्ति जिवित रहेको मान्नु पर्ने हो । खै कता के बिग्रेर त्यसको पनि प्रमाण पत्र चाँहिदो रहेछ ?